မြင့်သော အရှိန် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > မြင့်သော အရှိန် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
မြင့်သော အရှိန် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-M စီးရီး မြင့်သော အရှိန် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ အားလုံး ပေါင်းစုံ အလှည့် အခင်အရှင် လျှောက်လွှာများ (lineတစ်ဦးr ရွေ့လျားမှု အခင်အရှင်s)such အဖြစ် ကမ္ဘာလုံး အခင်အရှင်, ဂိတ် အခင်အရှင်, နှင့် etc.Our AOX-M စီးရီး မြင့်သော အရှိန် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နိုင် ဖြစ် စိတ်ကြိုက် အညီ သို့ အဆိုပါ အထူး လိုအပ်ချက်များ ၏ cusသို့mers. Bအဖြစ်ed အပေါ် တစ်ဦး ကျယ်ဝန်းသော rတစ်ဦးnge ၏ ထုတ်ကုန် အပါအဝင် မြင့်သော perဘို့mတစ်ဦးnce ပေါင်းစုံ အလှည့်, pတစ်ဦးrtl အလှည့်,နှင့် lineတစ်ဦးr တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့rs, ကျွန်တော်တို့ ၏fer တစ်ဦးuသို့mတစ်ဦးted solutiအပေါ်s ဘို့ အားလုံး အခင်အရှင် အမျိုးအစားများ, rတစ်ဦးnging မှ bအားလုံး အခင်အရှင်s သို့ dတစ်ဦးmpers.
AOX-M စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်များအတွက် 1. မော်တော်ကာကွယ်မှုပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်။
AOX-M စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဖွင့် / ချွတ်နှင့်အသိဉာဏ် Module ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ် fieldbus interface ကိုရိုးရှင်းကနေအမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
AOX-M စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်ပေါင်းစုံအလှည့်လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 3. ပေါင်းစည်းဒေသခံထိန်းချုပ်ရေး
Zhejiang Aoxiang Automation နည်းပညာ Co. , Ltd ကုမ္ပဏီ 16.200 စတုရန်းမီတာတစ်ဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာနှင့်အတူ, 12.300 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးလွှမ်း 1997 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဧရိယာ 12.600 စတုရန်းမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာ 20 ကီလိုမီတာကွာ Wenzhou လေဆိပ်နှင့် Wenzhou မီးရထားဘူတာကနေဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါယာဉ်အသွားအလာအဆင်ပြေပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနီးပါး 23 နှစ်ကြာလျှပ်စစ် actuators တွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုအထူးပြုနေတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း, ဒီဇိုင်း, သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်း, ပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့် training.The နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုပေါင်းစပ်ထက်ပို 60000 ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ရေနံနှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ , ရေကုသမှု, သင်္ဘော, စက္ကူ, ပါဝါဘူတာ, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အခြား fields.If သင်တို့သည်ငါတို့၏ AOX-M စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator turn စိတ်ဝင်စားနေကြသည်, E-mail ကို [email protected] ဖြင့်ငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရယူထားပြီး
နဲ့ multi အလှည့်လျှပ်စစ် actuator အာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ် AOX-M စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်၏အရည်အသွေး။ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးကိုအားလုံးအဆင့်ဆင့်အတွက်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးလှံတံ၏သဘောတူညီမှုဖြစ်ပါတယ်။
မေး: AOX-M စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်ပေါင်းစုံလက်ခံနိုင်ဖွယ်လျှပ်စစ် actuator လှည့်အဘို့နမူနာအမိန့်လား?
မေး: သင်မည်သို့ AOX-M စီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်အကြောင်းကိုcustomerâ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တခုအမြန် respnse ပေါင်းစုံလျှပ်စစ် actuator လှည့်စေသလဲ?
hot Tags:: မြင့်သော အရှိန် ပေါင်းစုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်